October | 2016 | Tho Hi
Knowledge about Ubuntu and Linux/GNU
Channel7maker program
31/10/2016 by thohi
Forever BEC-Tero နှင့် MRTV4 တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ TV ပရိုဂရမ်အသစ် “တီထွင်သူတို့ ရွှေအိမ်မက်” ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ဂုဏ်ယူစွာ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ “တီထွင်သူတို့ ရွှေအိမ်မက်” Program ဟာ ငယ်ရွယ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာများရဲ့တီထွင်မှုနှင့်ရည်မှန်းချက်ကိုမြင့်တင်စေတယ်။
ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားသောအရာများကို”တီထွင်သူတို့ရွှေအိမ်မက်”အစီအစဉ်တွင်လာရောက်ပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီပရိုဂရမ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က မည်သည့် ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးတီထွင်မှုမျိုးကိုမဆို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ တီထွင်သူတွေက သူတို့ရဲ့တီထွင်မှုကို ပြသရမှာဖြစ်ပြီး ဆုငွေ များပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
1. တီထွင်သူဟာ အထက်တန်းကျောင်း ၊အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ တက္ကသိုလ် ၊ ကောလိပ် ကျောင်းသားများနှင့် အခြားသောအသင်းအဖွဲ့ဝင်များမှ တီထွင်ဖန်တီးထားခြင်း သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားသောမည်သည့်ပစ္စည်းမဆိုလာရောက်ပြသနိုင်ပါသည်။
3. လျှောက်လွှာကို တစ်ဦးချင်းသော်လည်းကောင်း အဖွဲ့လိုက်သော်လည်းကောင်း (တစ်ဖွဲ့ လျှင် လူသုံးဦးထက်မပိုရ)၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူတို့သည် မိမိတို့၏တီထွင်ဖန်တီးမှုများကို ကျောင်း၏ ကိုယ်စား ဒါမှမဟုတ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း အနေဖြင့် မိမိတို့ဆန္ဒရှိသည့်အလျှောက် တင်ပြနိုင်သည်။
4. တီထွင်ပစ္စည်းများသည် ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးဖြင့်တီထွင်ထားခြင်းဖြစ်ရမည်။
လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူတိုင်းအတွက် ဆုကြေးငွေ ငါးသောင်း ကျပ်ချီးမြှင့်သွားပါမည်။ ထို့အပြင် ၄င်း၏ idea ကိုအကဲဖြတ်များမှ နှစ်သက်ပြီး ၀ယ်ယူခဲ့လျှင်ဆုငွေ သုံးသိန်း ချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ Program မှ ပစ္စည်းကိုယူထားမည်မဟုတ်ပါ။
Ubuntu weekly September Security 14
Ubuntu Kernel Team Summary September
Top 10 snaps in August
Firefox ရဲ့ servo အကြောင်း
RPi3and serial
RPI class 48 HR
Raspberry Pi ရဲ့ GPIO အကြောင်း
Archives Select Month September 2017 October 2016 July 2016 June 2016 February 2016 February 2015 March 2014 February 2014 October 2013 September 2013 December 2012 March 201
စာအုပ္ေလးမ်ား Select Category Books (8) Notes (24)